Bigil (2019) | MM Movie Store
Action Bollywood Drama Sport
တဈနှဈတဈကား ဆိုသလို တမီးလျမငျးသား ဗီဂြေးရဲ့ ၂၀၁၉ထှကျ ကားကောငျးတဈကားကို မွနျမွနျနဲ့ မှနျမှနျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။Genere- Drama,Sport,ActionIMDb – 7.5/10တဈရပျကှကျလုံးရဲ့ အာဏာရှိ လူမိုကျ မိုကျကယျ၊ မိနျးမလညျး မရှိ၊ ကြားလညျးမကိုကျ၊ သောကျသောကျစားစား လူရမျးကားလေး။
တနတေ့ော့ သူ့သူငယျခငျြး ကာဒီးရျဟာ အမြိုးသမီးဘောလုံးအသငျးရဲ့ နညျးပွအဖွဈနဲ့ အသငျးအတူ ဒလေီသှားဖို့ သူ့ဆီ ဝငျပါတယျ။မမြှျောလငျ့ဘဲ မိုကျကယျရဲ့ ရနျကွှေးတှကွေောငျ့ နညျးပွဆရာ ကာဒီးရျကို ဓားခကျြထိခဲ့ရတယျ။
ကွယျပှငျ့လေး ၁၅ပှငျ့ရဲ့ တဈဦးတညျးသော ကယျတငျရှငျ နညျးပွကာသီဟာ တဈနှဈတာ အနားယူရမယျလို့ သိလိုကျရစဉျမှာတော့…..————————————-ဒီဇာတျကားထဲမှာတော့ ဗီဂြေးကို ဘောလုံးသမား၊ လူမိုကျကွီး၊ နညျးပွ စသဖွငျ့ ပုံစံမြိုးစုံ မွငျရပွီး အဖလေိုတဈမြိုး သားလိုတဈဖုံ တှရေ့မှာပါ။
အဖေ ပေးတဲ့ အိပျမကျကို သားမကျခှငျ့ရခဲ့ပမေဲ့… လှဲခြျောခဲ့ရတယျ။ဒီအိပျမကျတှကေို သူ ပွနျလညျ အကောငျအထညျဖျောဖို့.. ကွိုးစားရငျး ထပျလှဲခြျောခဲ့တယျ။သို့ပမေဲ့…. ‘တခြို့အိပျမကျတှကေို ကိုယျမဖွဈခဲ့လို့ သူတပါးကို ဖွဈစခေငျြမိတာ လူတိုငျးရဲ့ ဆန်ဓပါ’ ‘ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့အိပျမကျကိုတော့ ကိုယျတိုငျပဲ အကောငျအထညျဖျောရတာပဲမလား’
တစ်နှစ်တစ်ကား ဆိုသလို တမီးလ်မင်းသား ဗီဂျေးရဲ့ ၂၀၁၉ထွက် ကားကောင်းတစ်ကားကို မြန်မြန်နဲ့ မှန်မှန် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။Genere- Drama,Sport,ActionIMDb – 7.5/10တစ်ရပ်ကွက်လုံးရဲ့ အာဏာရှိ လူမိုက် မိုက်ကယ်၊ မိန်းမလည်း မရှိ၊ ကျားလည်းမကိုက်၊ သောက်သောက်စားစား လူရမ်းကားလေး။
တနေ့တော့ သူ့သူငယ်ချင်း ကာဒီးရ်ဟာ အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းရဲ့ နည်းပြအဖြစ်နဲ့ အသင်းအတူ ဒေလီသွားဖို့ သူ့ဆီ ဝင်ပါတယ်။မမျှော်လင့်ဘဲ မိုက်ကယ်ရဲ့ ရန်ကြွေးတွေကြောင့် နည်းပြဆရာ ကာဒီးရ်ကို ဓားချက်ထိခဲ့ရတယ်။
ကြယ်ပွင့်လေး ၁၅ပွင့်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကယ်တင်ရှင် နည်းပြကာသီဟာ တစ်နှစ်တာ အနားယူရမယ်လို့ သိလိုက်ရစဉ်မှာတော့…..————————————-ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဗီဂျေးကို ဘောလုံးသမား၊ လူမိုက်ကြီး၊ နည်းပြ စသဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံ မြင်ရပြီး အဖေလိုတစ်မျိုး သားလိုတစ်ဖုံ တွေ့ရမှာပါ။
အဖေ ပေးတဲ့ အိပ်မက်ကို သားမက်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့… လွဲချော်ခဲ့ရတယ်။ဒီအိပ်မက်တွေကို သူ ပြန်လည် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့.. ကြိုးစားရင်း ထပ်လွဲချော်ခဲ့တယ်။သို့ပေမဲ့…. ‘တချို့အိပ်မက်တွေကို ကိုယ်မဖြစ်ခဲ့လို့ သူတပါးကို ဖြစ်စေချင်မိတာ လူတိုင်းရဲ့ ဆန္ဓပါ’ ‘ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အိပ်မက်ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ အကောင်အထည်ဖော်ရတာပဲမလား’
The Sin – Link 2
Fox in Fuso (2020)
Attack On Titan2(2015)
Are You Human Too? Episode 03 & 04